गौचन हत्याकाण्डः बाझियो कार्यदल र सीआईबीको अनुसन्धान, को हुन् त सुटर ? - EAAWAJ (इ-आवाज)
गौचन हत्याकाण्डः बाझियो कार्यदल र सीआईबीको अनुसन्धान, को हुन् त सुटर ?
काठमाडौं : निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलाई गोली हानी हत्या गरिएको घटनाको विषयमा छानविन गर्न गठित कार्यदल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान रिपोर्ट बाझिएको छ । कार्यदल र सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टमा घटनामा प्रयोग भएका सुटरबारे मत बाझिएको हो ।
गत २३ असोजमा काठमाडौंमा दिनदहाडै गौचनको गोली हानी हत्या भएको थियो । उक्त घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० गणेश केसीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा प्रहरीको विशेष ब्युरो, सीआईबी, अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका अधिकारीहरु संलग्न थिए । कार्यदलले गौचनको हत्या भएको एक महिनापछि घटनामा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नुवाकोटका २१ वर्षीय राजीव स्याङ्ताङले गौचनलाई गोली प्रहार गरेको भनाइ कार्यदलको थियो ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले भने घटनामा सुटरका रुपमा श्याम गोम्बे र अमरबहादुर राणा प्रयोग भएको देखाएको छ । कार्यदलले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति भएको दावी गरेका स्याङ्ताङलाई सीआईबीले समीरमानसिंह बस्न्यातका मुख्य सहयोगीमध्येका एक व्यक्ति मानेको छ ।
कार्यदलका संयोजक डीआईजी गणेश केसीले घटनामा संलग्न पाँच जनालाई सार्वजनिक गर्दै गौचन हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार समीरमान भएको बताएका थिए । र, कार्यदलले उनी भारतमा लुकेर बसेको आशंकामा खोजी तीव्र बनाएको थियो । यद्यपि, सीआईबीले ८ मंसिरमा घटनाका मुख्य योजनाकार समीरमानलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्दै कार्यदललाई नै चकित बनाइदियो ।
प्रहरीका केही अधिकारीहरु भने सीआईबीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याई चितवनमा केही दिन राखेर काठमाडौं ल्याएको दाबी गर्छन् । सीआईबीले उनलाई सार्वजनिक गर्दा अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषयसमेत बतायो । त्यो हो, करिब एक वर्षदेखि बस्नेत र पुनबीच कुनै सम्बन्ध छैन । गौचनको हत्यामा पुनको संलग्नता नरहेकोतर्फ सीआईबीको संकेत थियो, त्यो ।
कार्यदल प्रमुख डीआईजी केसी घटनामा दुई वटा गोलीको प्रयोग भएको बताउँछन् । सीआईबी र कार्यदलको प्रतिवेदन फरक परेको विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । सीआईबी प्रमुख कार्की पनि अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै यस विषयमा धेरै कुरा बताउन चाहँदैनन् ।
उनी अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् । उनको मुद्दा भने काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चलिरहेको छ । गौचनले आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कुमार घैंटेमार्फत् लगानी भित्र्याएका थिए । र, त्यही रकमसम्बन्धि विवादमा घैंटेको हत्या भएको प्रहरीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
← सरकार र संसद सचिवालयबिच कर्मचारी व्यवस्थापनमा खटपट, प्रदेश संसद चलाउने कर्मचारीको अझै लागेन टुंगो
रसुवा-भोटेकोशीको विद्युत खरिद सम्झौता डलरमा, निर्देशिका बनेपछिको पहिलो डलर पीपीए →